Home > ကိုယ်တို့အကြောင်း>FAQ
သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ စာရင်းပြုစုပါ။
၅) အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်အသံသွင်းခြင်းကွင်းဆက်ကို excellect ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်ခြင်း
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သည့်ဒေသများသို့အဓိကရောင်းချသည်၊ ခန့်မှန်းခြေအချိုးအစားမှာအဘယ်နည်း။ သင်၏စျေးကွက်တွင်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ ၆၀% ကိုအမေရိကသို့တင်ပို့ပြီး၊ ၃၀% ကိုအမေရိကသို့တင်ပို့သည်။ အခြားစျေးကွက်များအတွက်မူ ၁၀% နီးပါးရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအတိုင်းအတာကိုတိုးချဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲပြောင်းခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစက်ရုံကိုပြန်လည်အလှဆင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံခံစားမှုရရှိစေရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများကိုသက်သောင့်သက်သာအလုပ်လုပ်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုကိုလည်းပေးလိုပါသည်။ LED စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများကဲ့သို့ထွန်းသစ်စနှင့်အတော်လေးငယ်ရွယ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်လုံ့လရှိသူ၊ အသည်းအသန်၊ စမတ်၊ ပညာတတ်။ အသစ်သောအရာများကိုသင်ယူရန်ဆန္ဒရှိသည်။
သင့်မှာအရောင်း ၀ န်ထမ်းဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ။ စီးပွားရေးကိုစျေးကွက်အလိုက်ခွဲခြားထားပါသလား။
ပုံမှန်အားဖြင့်အရောင်းစာရေး ၁၀ ဦး ။ ၎င်းတို့အားပထဝီအနေအထားအရစျေးကွက်နှစ်သင်းခွဲခန့်ထားသည်။ အမေရိကအတွက်အသင်းနှင့်ဥရောပတိုက်အတွက်အဖွဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများဝေငှရန်နှင့်စျေးကွက်အတွင်းခိုင်မာစွာကြီးထွားရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။
ယခုနှစ်တွင်အမေရိကဈေးကွက်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပိုမိုတိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - LA တွင်သိုလှောင်ရုံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ချီကာဂိုနှင့်ဖလော်ရီဒါတို့တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောပို့ဆောင်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုတို့အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်မှာပြည်နယ်တစ်ခုစီမှကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုအားနက်ရှိုင်းစွာအပြန်အလှန်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ဤကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်စားသုံးသူများကိုအကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ facotry မှဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များအားကူညီထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ ကွင်းဆက် capacity.We ကိုလည်း OEM နှင့် ODM ကြိုဆိုပါတယ်။
U.S မှာပြသမလား။ သူတို့ကဘာတွေလဲ။
LED မီးအလင်းနှင့်ဆေးခြောက်နှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်များအတွက်ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိ CWCB Expo တွင်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏတက်ရောက်လေ့ရှိသည်။ LED မီးအလင်းအတွက် Guangzhou အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလင်းရောင်ပြပွဲနှင့် Hongkong Lighting Fair သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ul Multilisting: 1-2 ပတ်ကြာ
၅) UL မှပြန်လည်ဖြေဆိုပါ
၂။ သုံးစွဲသူများသည် DLC အကောင့်မရှိလျှင်အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။
၄။ ငွေတောင်းခံလွှာကို DLC မှထုတ်ပေးပြီးဖောက်သည်များကပေးချေပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် LED မီးကိုကောင်းစွာကြီးထွားစေပြီးသန့်စင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတွင် ဦး ဆောင်သက်တူရွယ်တူဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေသည်၊ PPF ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးမည်၊ PPFD ၏တူညီမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးမည်၊ ထုတ်ကုန်၏ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသည်။
နမူနာ LED မီးတစ်လုံးသည်အလင်းဘယ်လောက်ကျသနည်း။ နမူနာများအတွက် ဦး ဆောင်အချိန်ကဘာလဲ? ကုန်တင်ကုန်ချလျှင်အခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလား။
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်သက်တမ်းကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များဖြစ်သော Meanwell, Inventronics နှင့် Sosen ကိုရွေးချယ်သည်။
သင့်ကုမ္ပဏီတွင်သင်၏ QAs မည်မျှရှိသနည်း။ အချောထုတ်ကုန်များကိုအပြည့်အ ၀ စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ကျပန်းစစ်ဆေးခြင်းရှိသလား။
သင့်စက်ရုံ၏ FTT ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် SOP အရကျွန်ုပ်တို့၏ LED ကြီးထွားလာသောမီးအိမ်များကိုတင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်သည်
သင်၏ LED ကြီးထွားလာသည့်အလင်းသည် ETL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ LED ကြီးထွားနေသောမီးအိမ်များသည် ETL, CETL, CE, ROHS စာရင်းတွင်ပါသည်။
OA ငွေပေးချေမှုကိုကုမ္ပဏီမှလက်ခံပါသလား။ ဥပမာရက် ၆၀ ရက် ၉၀ ရက် ၁၂၀ ရက်
600H LED မီးမည်မျှထဲ့သည် 40HQ ကွန်တိန်နာတွင်ရှိသနည်း။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပျက်စီးမှုအတွက်သင့်ရဲ့ထုပ်ပိုးလုံလောက်ခိုင်မာပါသလား
ကျနော်တို့ထုံးစံထုပ်ပိုးများအတွက် 200 PCs လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် LED နှင့်သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသူအားလုံးတွင်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၀ န်ထမ်း ၅ ဦး ရှိသည်။
ထုတ်ကုန်၏အခက်အခဲအရ LED စက်ရုံမီးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးမှုသံသရာသည် ၂ လခန့်ဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းများကိုအခြားကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှသင့်စက်ရုံသို့ပို့ပေးလို့ရမလား။ ထိုအခါအတူတူ load?
ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ကွဲပြားခြားနားသော MOQ ရှိသည်။ ကြီးထွားလာသောအလင်းရောင်အတွက် MOQ သည် ၂ လုံးသာဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် LED အတွက်အလင်းကြီးထွားရန်အတွက်နမူနာအမှာစာပို့ရန်အချိန်သည် ၃၅ ရက်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောအမှာစာအတွက်ရက်ပေါင်း ၂၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းကြာလိမ့်မည်။